စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တရုတ် နိုင် ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တရုတ် နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲ (CIIE) ကျင်းပမည့် ပင်မနေရာဖြစ်သော အမျိုးသားပြပွဲနှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (ရှန်ဟိုင်း) အား အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရှန်ဟိုင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တရုတ် နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲ (CIIE) အား နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည်။ ယခုနှစ်ပြပွဲမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများအနက် အချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အကျယ်အဝန်း စတုရန်းမီတာ ၃၆၆,၀၀၀ ကျော် ကျယ်ဝန်းသော ပြခန်းဧရိယာဖြင့် ယခုနှစ် CIIE ပြပွဲသည် နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၁၂၇ ခုမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၃,၀၀၀ နီးပါးကို ဆွဲဆောင်ထားပြီး နောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့သော ပြပွဲထက် ပိုမိုများပြားသည်။
— အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်နှင့် ယူကေ စသည့်နိုင်ငံများမှ ပြပွဲပြသသူများစွာနှင့် ၎င်းတို့၏ ပြခန်းဧရိယာများသည် ယခင်ပြပွဲသုံးခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်မှုရှိသလို ယခင်ပမာဏအတိုင်းလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
Fortune 500 ကုမ္ပဏီများနှင့် ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းကြီးများမှ ပါဝင်သူများမှာ ယခင်ပြပွဲထက် များပြားမည်ဖြစ်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ အနည်းဆုံး ၃၃ နိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၉၀ ခုလည်း ပြပွဲသို့ပါဝင်တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်မည့် ပြပွဲများတွင်မူ ကွန်ဂို၊ ခီရီဘာတီ၊ မောရစ်ရှ၊ ဆော်လမွန်ကျွန်းစုနှင့် ပါလက်စတိုင်းမှလည်း ဝင်ရောက်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံများသည် ကိုဗစ်-၁၉ သက်ရောက်မှုကြောင့် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် CIIE တွင် ပါဝင်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။
— World Openness Report 2021 နှင့် နိုင်ငံ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ ၁၂၉ နိုင်ငံ၏ ပွင့်လင်းမှုဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းကိုလည်း ယခုနှစ် CIIE ပြပွဲအတွင်း ဖိုရမ်၌ ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်။
“အညွှန်းကိန်းက ကမ္ဘာကြီးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ တံခါးဖွင့်မူဝါဒ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကို ဖော်ပြကာ လေ့လာဆန်းစစ်ထားပြီး တံခါးဖွင့်ဝါဒ အတွေ့အကြုံများအား အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခြင်းနှင့် အနာဂတ်လမ်းကြောင်းများနှင့် တံခါးဖွင့်ဝါဒ အထူးမူဝါဒ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်များ လျာထားသတ်မှတ်ထားပါတယ်” ဟု ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအင်စတီကျု၊ တရုတ် လူမှုသိပ္ပံအကယ်ဒမီ အကြီးအကဲ Zhang Yuyan က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီအညွှန်းကိန်းက နိုင်ငံအများစုရဲ့ တံခါးဖွင့်ဝါဒကျင့်သုံးမှုတွေရဲ့ ရည်ညွှန်းတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) သို့ တရုတ်နိုင်ငံ ဝင်ရောက်ခြင်း နှစ် ၂၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပသော အဆင့်မြင့်ဖိုရမ်ကိုလည်း ပြပွဲအတွင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
–ထုတ်ကုန်သစ်များကိုလည်း ပြပွဲ၌ ကြေညာသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ထုတ်ကုန် ၉ ခု၏ ပွဲဦးထွက်ပြသခြင်းကိုလည်း ဉာဏ်ရည်ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာကဏ္ဍတွင် ထည့်သွင်းပြသမည်ဖြစ်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များကဏ္ဍတွင် နည်းပညာသစ်များနှင့် ထုတ်ကုန်အသစ်များကို ကြေညာမည်ဖြစ်ကာ ယခင်ပြပွဲများထက် အရေအတွက်များ ကျော်လွန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်သုံး မော်တော်ကားများကဲ့သို့ အစိမ်းရောင်နှင့် ကာဗွန်လျှော့ချသော နည်းပညာများနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများကလည်း ယခုနှစ်ပြပွဲတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအဖြစ် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
–ပြပွဲ၌ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနှင့် အနုပညာလက်ရာ အထူးဧရိယာတစ်ခုလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြခန်းပြသသူများ၏ အနုပညာပစ္စည်းများ စုဆောင်းထားမှုနှင့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ ရောင်းချမှုအတွက် အကောက်ခွန်နှင့် အခွန် ဦးစားပေးမူဝါဒများအရ CIIE ပြပွဲသည် ယခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနှင့် အနုပညာလက်ရာများဆိုင်ရာ အထူးဧရိယာတစ်ခု ထည့်သွင်းထားကြောင်း သိရသည်။
ယူကေနှင့် စပိန်အပါအဝင် နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၁၁ ခုမှ ပြည်ပအင်စတီကျု ၂၀ ကလည်း ပြပွဲ၌ ပါဝင်ရန် အတည်ပြုထားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနှင့် အနုပညာလက်ရာ ၁၇၈ ခုကို ထည့်သွင်းပြသမည်ဖြစ်ကာ ကာလတန်ဖိုးအားဖြင့် စုစုပေါင်း ယွမ် ၂.၃၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၈၆ သန်းခန့်) ရှိကြောင်း ကြေညာထားသည်။
–ဒီဂျစ်တယ်ယွမ်ငွေကြေး (RMB) ။ ပြပွဲတွင် ငွေပေးချေမှုအတွက် ဒီဂျစ်တယ် ယွမ်ငွေကြေးဖြင့် ပေးချေခြင်းကိုလည်း လက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် Bank of China မှတစ်ဆင့် ဒီဂျစ်တယ် ယွမ်ငွေဖြင့် ၎င်းတို့၏ဒေသခံငွေကြေးများဖြင့် လဲလှယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
–ပြပွဲ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို တင်းကြပ်စွာကန့်သတ်ထားသည်။ CIIE တွင် ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး လိုအပ်ချက်များကို တင်းကြပ်စွာ အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဟု ရှန်ဟိုင်း မြူနီစီပယ် ကျန်းမာရေးကော်မရှင် အကြီးအကဲ Wu Jinglei က ပြောခဲ့သည်။
ပြပွဲအတွင်း ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဆေးရုံ ၃၄ ခုကို သတ်မှတ်ထားရှိသည်။ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်ကတည်းက ဒေသတွင်းဆေးရုံ ၂၁ ခုတွင် နိုင်ငံသားများအတွက် nucleic acid စစ်ဆေးခြင်းကိုလည်း နေ့ညမပြတ် ပံ့ပိုးထားရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
(CIIE) China Focus: Highlights of 4th China International Import Expo
Source: Xinhua| 2021-11-04 13:56:36|Editor: huaxia
SHANGHAI, Nov.4(Xinhua) — The 4th China International Import Expo (CIIE) is scheduled for Shanghai from Nov.5to 10. Here are some of the highlights we can expect from this year’s expo:
— With an exhibition area of more than 366,000 square meters, this year’s CIIE draws nearly 3,000 businesses from 127 countries and regions, both higher than its last edition.
— The World Openness Report 2021 and the Index on Openness for 129 economies since 2008 will be published ataforum during the CIIE this year.
“The index depicts and analyzes the evolution of the world’s overall and China’s opening-up policies, summarizes proven openness experiences, and marks future directions and specific openness policy options,” said Zhang Yuyan, head of the Institute of World Economics and Politics, Chinese Academy of Social Sciences, one of the index compilers.
“The index is of reference value to the openness practices of most economies,” he added.
A high-level forum themed on the 20th anniversary of China’s accession to the WTO will be also held during the expo.
— New products will be launched at the expo. Nine global debuts will feature in the Intelligent Industry & Information Technology section.
— A special area for artifacts and artworks. Thanks to preferential customs and tax policies for the exhibitors’ sales of artworks collectibles and antiques, the CIIE set upaspecial area for artifacts and artworks for the first time this year.
— Digital Renminbi (RMB) experience. Digital RMB will be accepted for payments at the exhibition. Foreign visitors can also exchange their local currencies to digital RMB through the Bank of China.
— Strict COVID-19 prevention and control measures. The CIIE will strictly implement epidemic prevention and control requirements, said Wu Jinglei, head of the Shanghai municipal health commission.
The expo has designated 34 hospitals for medical services during the expo. Around-the-clock nucleic acid testing services have been provided to citizens in 21 local hospitals since Oct. 28. Enditem
Photo : Photo taken on Oct. 23, 2021 shows the south square of the National Exhibition and Convention Center (Shanghai),amain venue for the fourth China International Import Expo (CIIE), in east China’s Shanghai. The expo is set to take place in Shanghai from Nov.5to 10 this year. (Xinhua/Fang Zhe)
ဈေးဝယ်ပွဲတော်ကြီးမတိုင်မီ အလိုအလျောက် ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည့် ဒလီဗာရီ ယာဉ်လေးများ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကျောင်းဝင်းများအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာ